ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်အကြမ်းဖက်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်း (၂၀၀၀) - Your Brain On Porn
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကို (2000) အကြားဆက်သွယ်မှုကိုစူးစမ်းခြင်း
ဘာဂန်, Raquel ကနေဒီနှင့်ကက်သလင်းအေ Bogle ။
အကြမ်းဖက်မှုနှင့်သားကောင်များ 15 မရှိ။3(2000): 227-234 ။
ဤဆောင်းပါးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းအကြားဆက်ဆံရေးကို examine နှင့်အကြမ်းဖက်မှုအမျိုးသမီးအတွေ့အကြုံများအပေါ်ညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများထပ်မံနားလည်မှုပေးထားပါတယ်။
ညစ်ညမ်းအမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်မှဆက်စပ်ကြောင်းအယူအဆကိုပံ့ပိုးသောသုတေသနတစ်ခုကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်ရှိပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုကနောက်ထပ်ညစ်ညမ်းနှင့်အမျိုးသမီးဆန့်ကျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကြားဆက်ဆံရေး delineate မှကောက်ယူခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအမျိုးသမီးအတွေ့အကြုံများနှင့်ညစ်ညမ်း၏၎င်းတို့၏အလွဲသုံးစားပြုသူများ '' အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ဒေတာကို 100 အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူကနေအဓမ္မပြုကျင့်မှုအကျပ်အတည်းစင်တာမှာစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။
တွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းရှင်းလင်းစွာဒီနမူနာထဲမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကြမ်းတမ်းအတွေ့အကြုံများအချို့နှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရကြောင်းဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ 100 သင်တန်းသားများ၏နှစ်ဆယ်ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းက၎င်းတို့၏အလွဲသုံးစားပြုသူများညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောကပြောသည်။ သို့သော်ဖြေဆိုသူအများစု (58 ရာခိုင်နှုန်း) သူတို့ညစ်ညမ်း၏၎င်းတို့၏အလွဲသုံးစားပြုသူများ '' အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မသိကြောင်းဖြေသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူအမျိုးသမီးများ၏တစ်ဦးကသိသိသာသာအရေအတွက်ကညစ်ညမ်းအလွဲသုံးစားမှု၏အမှန်တကယ်အဖြစ်အပျက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းညွှန်ပြ။ တကျိပ်နှစ်ပါးသောရာခိုင်နှုန်းကညစ်ညမ်းအလွဲသုံးစားမှုသူတို့ရဲ့အတှေ့အကွုံစဉ်အတွင်းတုပခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယေဘုယျအား, ဒီသုတေသနရဲ့တွေ့ရှိချက်အမြိုးသမီးမြားဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများအကြားဆက်ဆံရေးလည်းမရှိသောစိတ်ကူးထောက်ခံပါတယ်။ ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုသည်မရနိုင်စဉ်သို့သော်အဆိုပါသုတေသနညစ်ညမ်းအမျိုးသမီးတချို့တို့ကကြုံတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုသက်သေအထောက်အထားပေးပါဘူး။ ညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်နောက်ထပ်သုတေသနအထူးအမျိုးသမီးများခွဲလူဦးရေပစ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ မှတ်စုများနှင့်ညွှန်းဆို
Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်ထဲမှာရရှိနိုင် အသံ, ebook များနှင့် paperback မှ $5.99။ အကွိမျမြားစှာဘာသာပြန်ချက်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
အခုတော့ Buy ဘာသာပြန်ချက်များ
05 / 20 / 2021
Kris တေလာ၏“ Porn နှင့် Erectile Dysfunction အကြောင်းခက်ခဲသောအမှန်တရားအနည်းငယ်” VICE မှာတော့သင်တန်း၏။ t.co/4yiex7cL0r
@paulahall_psych @YourBrainOnPorn @PsychCentral ဆောင်းပါးမှ: "သို့သျောလညျး, သောအကြံပြုဖို့ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများမရှိ ... t.co/V5lsdJmxyb
ဂယ်ရီ Wilson ကအားဖြင့် Retweeted
Reboot Nation join
တစ်ဦးက "reboot" အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအပါအဝင်အတုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ, ကနေပြီးပြည့်စုံသောအရာကြွင်းလေဖြစ်ပါတယ်။ မှာအားပေးမှုနှင့်ပညာရေးနှင့်သင်၏ဦးနှောက် reboot
Key ကို Concepts ၏အကျဉ်းချုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ & မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
porn-သွေးဆောင် ED ဆောင်းပါး
လူငယ်ဘဝတွင်စိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက် Sharp ကထ
အဘယ်အရာကိုကျွမ်းကျင်သူများက PIED ဆငျးရဲဒုက်ခကိုပြောပြပါ
Change & Recovery အတွက် Tools
Support & Help အတွက်ရွေးစရာများ
အောင်မြင်သော reboot မှစ. အကွံဉာဏျ
Rebooting & Porn အသုံးပြုမှုမကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများ
Recovery ကို (ပြန်ဖွင့်) Self-အစီရင်ခံစာများ
ဖိုရမ်, ဘလော့များ, Threads
မေးခွန်းထုတ်စရာ & အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာရေး
ICD-11: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder
အကျိုးစီးပွားများ Videos မ
ဘလော့များ & Vlogs